Wednesday July 29, 2020 - 08:38:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Cabdi Fataax Alsiisi ayaa hadal uu shalay ka jeediyay magaalada alqaahira wuxuu ku sheegay in dowladdiisu ay gelayso dagaal dhanka wadahadallada ah isagoo meesha ka saaray in xal melleteri ay u adeegsadaan qadiyadda biya xireenka Al Nahada.
hoggaamiyaha Masar ayaa soo hadal qaaday in biya buuninta alnahda iyo ka shaqeysiintiisa ay dhibaata weyn ku tahay shacabka Masar sidaas oo ay tahayna ay diyaar uyihiin wadahadal nabadeed wuxuuna meesha ka saaray dagaal ka dhax qarxa Itoobiya iyo Masar.
"waxaan dhaqaajinaynaa Macrako dhanka wadahadallada ah oo ku aaddan biya buuxinta biya xireenka iyo ka shaqeysiintiisa" sidaa waxaa yiri Cabdi Fataax Alsiisi xilli uu ka qeyb gelayay munaasabad lagu daah furayay mashruuca warshadaha oo laga hirgeliyay hareeraha magaalada alqaahira.
Alsiisi wuxuu intaas sii raaciyay in wadahadalladu ay daba dheeraan karaan wuxuuna ku sumadeeyay "macrakada wadahadallada ee dheer", hoggaamiyaha xukuumadda dabadhilifka Masar ayaa rajo ka muujiyay in ay miradhal noqdaan wadahadallada kala dhaxeeya dowladda Xabashida Itoobiya oo marnaba aan gorgortan ka gelin dhismaha biya xireenka ugu weyn qaaradda Afrika.
Bishaan gudaheeda ayay xoogeysatay xiisadda udhaxeysa sedaxda dowladood ee isku haya qeybsiga biyaha wabiga Niil kadib markii ay Itoobiya sheegtay in ay bilaawday biya buuxinta biya xireenka Al nahda waxaana horay ufashilmay dhammaan wadahadalladii lagu doonayay in xiisadda lagu qaboojiyo.
dowladda Xabashida Itoobiya ayaa biya xireenka ay dhisayso ku doonaysa in ay kasoo saarto korontada ugu awoodda badan qaaradda Afrika si dadkeedu uga baxaan faqriga iyo mugdiga halka Masaaridu ay wadnaha farta ku hayaan waxayna ka baqayaan in ay waayaan biyaha uga yimaad wabiga Niil.